नेपालमा ३५ लाख एटीएम जोखिममा, कतै तपाईको पनि त परेन ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
नेपालमा ३५ लाख एटीएम जोखिममा, कतै तपाईको पनि त परेन ?
काठमाण्डौं । एटीएम हृयाक गर्ने अन्तराष्ट्रिय गिरोह नेपालमा लगातार पक्राउ पर्न थालेपछि बैंकिङ सुरक्षा चुनौतिपूर्ण बन्न थालेको छ । सीआइबीका प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवालका अनुसार नेपालका ३५ लाख एटीएम कार्डहरु जोखिममा छन् ।
पछिल्लो समय एटीएम बुथबाट पैसा चोरी गर्ने विदेशी नागरिकहरु समेतको संगठित गिरोह नै नेपालमा सक्रिय रहेको खुलेको छ । नेपालको कमजोर सुरक्षा प्रणालीको फाइदा उठाउँदै संगठित गिरोह नै अर्काको एटीएम पीन प्रयोग गरेर रकम झिक्ने कार्यमा सक्रिय छन् । अर्काको एटीएम बुथबाट रकम झिक्ने कार्यमा संलग्न रोमानियाका तीन नागरिकहरुलाई पक्रेर सीआइबीले हिजो सोमबार मात्रै सार्बजनिक गरेको छ ।
गत शुक्रबार दिउँसो करिब १२ बजे इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ठमेलस्थित एटीएम बुथमा एक विदेशी नागरिक प्रवेश गरे । कालो टिसर्ट र हाफ पाइन्ट लगाएका ति विदेशीले दायाँ बायाँ नहेरी पैसा निकाल्न थाल्छन् । तर उनले पैसा एउटा एटीएमबाट मात्रै निकालेनन् । करिब ८ मिनेट लगाएर लगातार १० वटा एटीएम प्रयोग गर्दै पैसा निकालिरहे । एक जना विदेशी नागरिकले १० वटा एटीएम प्रयोग गरेको देखेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सीसी क्यामरा निगरानी गरिरहेका कर्मचारीले शंका गरे ।
बैंकका उपमहाप्रवन्धक बिजेन्द्र सुवालले भने, ‘एक त विदेशीले एटीएम प्रयोग गरेर पैसा निकाल्दैनन् । यदि कसैले यस्तो गर्छ भने हाम्रो शंकाको घेरामा पर्छ । तर यसले त एकैपटकमा त्यति पैसा निकालेपछि हामीले सीआइबीलाई खबर गरेका थियौं ।’
बैंकबाट खबर आएपछि सीआइबीले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । दुई साता अघि मात्रै एक रोमानियन नागरिक पक्राउ गरेको सीआइबीको टोलीले शुक्रबार साँझ नै ठमेलको नर्सिङ चोकस्थित नेपाल तारा होटलबाट एक जनालाई पक्राउ गर्‍यो । उनी नै थिए पैसा निकाल्ने रोमानियन नागरिक ५२ वर्षीय गिता हुजम । उनलाई नियन्त्रणमा लिएको केहीबेरमा अरु दुई जना आइपुगे, इसोफ मोरउ र एलेक्स क्रिष्टेन । सीआइबीको टोलीले उनीहरूको कोठामा छापा मार्दा ३ सय ५३ थान नक्कली एटीएम कार्डहरु भेटिए ।
तीन जना रोमानियनको साथबाट सीआइबीको टोलीले एउटा हिडन क्यामेरा पनि बरामद गरेको छ । त्यो यस्तो हिडन क्यामेरा हो जसले हामीले प्रयोग गरेको एटीएमको टाडा चोर्न सक्छ ।
बिहानै एटीएमका बुथहरुमा जाने र कार्डको डाटा चोरी गर्न कार्ड स्किमिङ उपकरण र सीसी क्यामेरा एटीएम छिराउने मेसिनमा राखेर आउने उनीहरुको शैली थियो । त्यसरी कार्ड स्किमिङ र हिडन क्यामेरा राखेपछि दिनभर उक्त बुथ प्रयोग भएका एटीएमहरुको पिन नम्बरदेखि डाटासम्म चोरी हुन्थ्यो । त्यही डाटा तथा पिनको आधारमा पैसा निकाल्ने गरेको सीआइबीका प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवालले बताए ।
यिनीहरुले नेपालबाट कति पैसा निकाले खुल्न सकेको त छैन तर पक्राउ परेकाहरुको साथबाट १० हजार युरो, तीन लाख नेपाली रुपैयाँसँगै २५ हजार डलर पर्ने घडी प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
धेरै पैसा बोकेर हिँड्दा जोखिम हुने भएकाले धेरै बैंकका ग्राहकहरुले एटीएम कार्ड प्रयोग गर्छन् । कार्डमात्रै बोके पुग्ने र चाहिएका बेला आवश्यक रकम झिक्न मिल्ने भएकाले बैंकहरुले पनि ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी जतिसक्यो धेरै एटीएम बुथ स्थापना गरेर सुविधा दिँदै आएका छन् । तर, नेपालको बैंकिङ सुरक्षा चुनौतिपूर्ण बनेको सीआइबीका प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवाल बताउँछन् ।
‘यसअघिका घटनाहरुमा विदेशीहरुको डाटा चोर ल्याउने र नेपालबाट पैसा चोरी गरेका घटनाहरु थिए । तर अहिले नेपालीहरुको पनि डाटा चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय हुन थालेको भेटियो । यसले नेपालको ३५ लाख एटीएम कार्डहरुलाई जोखिममा पारेको छ,’ डिआइजी सिलवालले भने ।
आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर नेपालका एटीएम प्रयोगकर्ताको डाटा चोरेर विदेश पठाउने र उतैबाट पैसा चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय छ । नेपालमा अर्काको एटीएमबाट पैसा चोरी गर्न पूर्वी युरोपको गिरोह सक्रिय भैरहेको सीआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआइबीले पनि बुल्गेरिया, रोमानिया, टर्की लगाएतका देशका नागरिकहरुलाई निगरानी गर्न थालेको छ ।
एटीएम हृयाकरको अन्तराष्ट्रिय गिरोह नेपालमा सक्रिय हुन थालेपछि प्रहरीले सबै एटीएम प्रयोगकर्तालाई सुरक्षा उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ । आफूले प्रयोग गरिरहेको एटीएमको पिन नम्बर तत्काल परिवर्तन गर्न डिआइजी सिलवालको सुझाव छ ।
त्यसैगरी आफूले प्रयोग गर्ने एटीएम बुथहरुमा कुनै अस्वाभाविक उपकरण छ कि छैन हेर्ने, आफ्नो खाताबाट पैसा निकालिएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन मोबाइल एलर्ट राख्ने र आफ्नो एटीएम कार्ड अरुलाई नदेखाउने गर्न पनि सकिन्छ ।
एटीएम हृयाकर नेपालमा मात्रै होइन, भारत र युरोपमा समेत सक्रिय छ । ह्याकरको निसानामा परेपछि केही दिन अघि मात्रै भारतमा ३२ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्डहरु रद्द गरिएको र न्युजिल्याण्डमा एक लाख अमेरिकी डलर चोरी भएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उपमहाप्रवन्धक बिजेन्द्र सुवाल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘यस्ता गिरोह युरोपदेखि अमेरिकासम्म सक्रिय छन् । हामीले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदा रोमानियाका नागरिकहरु पक्राउ परे । त्यसैले हामी आफै सतर्क हुनुपर्ने देखिएको छ ।’
उनले सबै एटीएम प्रयोगकर्ताहरुलाई तत्काल आफ्नो पिन नम्बर परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिए ।
२३ कार्तिक २०७३, अनलाईनखबर, १०।००
रसुवागढी र साञ्जेनकोआइपिओ बिक्री शुरु गर्न लागिएकै समयमा सि–आश्वा प्रणाली लागू
काठमाडौँ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सर्वसूलभ बनाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिले
चौतारी पुरस्कार घोषित, हेर्नुहोस को–को भए छनोट
काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले यस वर्ष प्रदान गरिने विभिन्न पुरस्कार घोषणा गरेको छ ।
किन मानेन विद्युत प्राधिकरणले सौर्य विद्युत खरिद गर्न ?
काठमाडौँ । सौर्य ऊर्जा उद्यमीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न आलटाल गरेको
जुत्ता चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनी शुरु, नेपालमा ३५ प्रतिशत नेपाली जुत्ता प्रयोग हुँदै
काठमाडौँ । नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग व्यवसायी संघको आयोजनामा प्रथम जुत्ता चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनी शुरु
विहीवार यस कारण गिरावाट आयो शेयर बजारमा, कसरी घटेर बन्द…
८७ करोड रूपैयाँ बराबरको आइपिओ भोलि बाटै
बचतमै सर्वोच्च ब्याजदर दिँदै सिभिल बैंक, हेर्नुहोस साथमा अन्य स्किम…
पर्यटन बोर्डको घोटाला काण्डमा विशेषले गर्यो फैसला, को को परे कारवाहीमा ?
काठमाडौ । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्ड घोटालामा बोर्डका पुर्व सिइओ सहित तीन जनालाई सजाय
भक्तपुर । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत १५ किलोमिटर लामो सूर्यविनायक–धुलिखेल आठ लेनको सडक जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण